कहिलेसम्म रहन्छ काठमाडाैंकाे वायु प्रदूषण ? — Imandarmedia.com
कहिलेसम्म रहन्छ काठमाडाैंकाे वायु प्रदूषण ?
काठमाडाैं । विश्वकै सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषण काठमाडाैंमा देखिएको छ । विश्वभरका सहरको हावाको शुद्धता मापन गर्ने आइक्यू एअर डटकमका अनुसार काठमाडाैंको एक्यूआई अहिले ४२१ रहेको छ ।
हिजोदेखि उपत्यकालगायत देशका विभिन्न ठाउँको हावाको प्रदूषण अझै केही दिन रहने भएको छ । हिजो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक अवस्थामा पुगेको हावाको प्रदूषण खतराको अवस्थाबाट अझै तल झरेको छैन ।
हिजो काठमाडाैंमा एक्यूआई ४७० सम्म पुगेको थियो । हिजोको तुलनामा केही कम भएको देखिए पनि यो सुधार हुन अझै केही दिन लाग्ने वातावरण विभागले जनाएको छ । हावाको प्रदूषण मापन सूचक (एक्यूआई) दुई सयभन्दा माथि जानु स्वास्थ्यका लागि घातक मानिन्छ । ३ सयभन्दा माथि पुग्नुलाई अति हानिकारक मानिन्छ ।
नेपालमा धेरैजसो जिल्लाहरुमा डढेलो लागिरहेको र तत्काल पानी पर्ने सम्भावनासमेत नरहेकाले अबको केही दिनसम्म वायुमण्डल सुधार हुने सम्भावना नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । काठमाडाैं उपत्यकाको भक्तपुर, कीर्तिपुर, भैंसेपाटी, सिमरालगायतका ठाउँको एक्यूआई हिजोदेखि तीन सय नाघेको छ ।
हेटौँडा, विराटनगर, जनकपुर, धनगढी लगायतका ठाउँमा पनि हावाको प्रदूषण अत्याधिक बढेको छ । हावाको प्रदूषण मापन सूचक (एक्यूआई) सबैभन्दा धेरै काठमाडाैंमा देखिएको छ । एक्यूआई ३ सय नाघ्नुलाई स्वास्थ्यका लागि निक्कै घातक मानिने र यस्तो अवस्थामा विपद् घोषणा गर्नुपर्ने वातावरणविद्हरुको भनाइ छ ।